धेरै वर्षपछि आज आज अचानक भेट हुँदा “खेताला लोग्ने ” - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
धेरै वर्षपछि आज आज अचानक भेट हुँदा “खेताला लोग्ने ”
धेरै वर्षपछि आज आज अचानक भेट हुँदा कृष्ण र कुमार असाध्यै खुसी भए। अप्रत्यासित भेटले उनीहरुको मानसपटलमा बाल्यकाल चल्मलाउन थाले।बाल्यकालको साथी कृष्ण अमेरिकाबाट पिएचडी सकेर विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक भएको खबर सुनेर कुमारका आँखा खुसीले रसाए।‘घरपरिवारको बोझले थिचिएर धेरै पढ्न सकिनँ’, कुमारले कृष्णसँग दुखेसो पोख्यो, ‘म त कृषक पो भएर बसेको छु।’काम सानो ठूलो हुँदैन भनेर कृष्णले सम्झायो। दुवैले बाल्यकालका सम्झनामा डुबुल्की मार्न थाले। खोलामा पौडी खेलेको, माछा मारेको क्षण सम्झे। एकदिन पौडी खेलेर निस्कँदा खोलाले दुवैको लुगा बगाएको थियो। अण्डरवेयर समेत नहुँदा दुवैले आ-आफ्ना हातले लाज छोपेर घरसम्मै दौडँदै गएको कुरा सम्झनेबित्तिकै हाँसोको फोहोरा छुट्यो।
खानापछि कुवेर र कुशल दुवै स्कुल गए। जानु मेलापात गइन्। वर्षौंपछि दुवै साथी फुर्सद निकालेर आँगनमा गफिए, न्यानो घाम ताप्दै ।कुरैकुराको सिलसिलामा कुमारले सोध्यो, ‘कृष्ण बिहे गरीस् कि छैनस्? कि सँधै क्याम्पस पढाएर बस्ने विचार छ? बुढो होलास् नि?’कृष्ण फिस्स हाँस्यो र कुमारका प्रश्नको सहज तरिकाले जवाफ दियो। ‘अध्ययनमा व्यस्त हुँदा बिहे गर्ने मुड चलेन। अमेरिकामा पढ्दा गर्लफ्रेण्ड त थुप्रै थिए। रिल्याक्स गरियो’, कृष्णले भन्दै गयो, ‘पछि सबैले आ-आफनो सुर गरे। म पनि नेपाल आएँ, क्याम्पस पढाउन थालेँ। समय त्यसै बित्यो।’‘तैँले त विदेशमा खुब मोज गरिछस् नि’, उल्ल्यायो कुमारले। अनि दुवै हाँसे गलल्ल।‘कुमार तैँले त चाँडो बिहे गरिछस् नि, भाउजू त भर्खरकी हुनुहुँदोरै’छ त?’ कृष्णले सोध्यो ।
‘मेरो फूलमा भमरा बनेर अब कहिल्यै नआउनु है’, विश्वास गरेको परममित्रले घात गरेको देखेर कुमार नाजवाफ भएर फर्कियो। सदाका लागि आफ्नो जीवनबाट बिदा होस् भन्ने कामना गर्दै उनीहरुले कुमारलाई बिदाइको हात हल्लाइरहे। कुमार आफ्नो मित्रको छायाँमा लतपत भएको अविश्वासको पीडा बोकेर बढिरह्यो आफ्नै पुरानो संसारतिर।( देबकी के सी को कथा “खेताला लोग्ने ” यो कथा दैनिक नेपाल न्युजमा रहेको छ हामीले साभार गरेका हौ)